खाँदबारी बजारमा सार्वजनिक सौचालय कहिले बन्छ ?
खाँदबारी । मानौ, तपाई पुग्नु भएको सहर बजारमा आफ्नो काम गर्दागर्दै दिसा वा पिसाव आयो । त्यहाँ कुनै सार्वजनिक सौचालय छैन । चिनजानको मान्छे पनि छैन र त्यहाँका मानिसहरुले सौचालय प्रयोग गर्न दिदैनन् । अव तपाई के गर्नुहुन्छ ?
ठ्याक्कै यो अवस्था अहिले खाँदबारी बजार आउने नागरिकहरुले भोगिरहेको समस्या हो । दशै विशेष किनमेल गर्न गाउँगाउँबाट आउनेहरुले खाँदबारी बजारमा यहि समस्या भोगिरहेका छन् । बजार आउछन्, सौंच आईहाले मानिसहरुको चहलपहल कम भएको ठाँउ तिर गएर विसर्जन गर्यो । कतिपयले त बाध्यतामा परेको भन्दै लाज पचेर पनि विसर्जन गर्नु परेको छ ।
अहिले सिंगो देश नै खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिसकिएको छ । अझ सङ्खुवासभालाई एक बर्ष अघि नै खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । तर, जिल्लाको सदरमुकाम खाँदबारी बजारमा कतै पनि सार्वजनिक सौचालय छैन । जिल्लाको मुटु समेत मानिने खाँदबारी बजारमा सार्वजनिक सौचालय नहुँदा गाउँबाट बजार आएकाहरुले समस्या भोग्दै आएका छन् । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय नहुँदा गाउँ गाउँबाट सामान खरिद विक्रि गर्न आउनेहरुले सौंच गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
बजार क्षेत्रमा रहेकै बेला सौंच गर्नु परे खुल्ला ठाउँमा नै गर्नुको विकल्प नरहेको उनीहरु बताउछन् । बजारमा सौंच आईहाले बास बसेको होटल वा कोठा पुग्ने सम्भावना नभएकोले धेरै मानिसहरु शान्त ठाउँ खोजेर विसर्जन गर्ने गरेको सभापोखरीबाट खाँदबारी आउनुभएका खबरमान राईको भनाई छ । ‘बजार क्षेत्रका घर, पसलहरुको सौचालय जान खोज्दा घरधनीले दिदैनन्, मानिसहरु कम भएका ठाउँमा गएर सौंच गर्नुपर्छ’, राईले भन्नुभयो ।
खाँदबारीको मुख्य बजार क्षेत्र नयाँ बजारदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म कतै पनि सार्वजनिक सौचालय छैन । सनिबारे हटिया लाग्ने टुँडीखेलमा एउटा सानो सौचालय बनाईएको भएपनि त्यो प्रयोग बिहिन जस्तै छ । उक्त सौचालयमा पानी नभएपछि सौचालय हुनुको कुनै अर्थ नरहेको स्थानीय बताउछन् । उक्त टुँडीखेल भन्दा केही तल रहेको बसपार्क क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक सौचालय छैन । दैनिक हजारौको जमघट हुने बसपार्कमा सौचालय नहुँदा यात्रु र स्थानीयले समस्या भोग्दै आएका छन् । सवारी साधनबाट घण्टौको यात्रा गरेर खाँदबारी बसपार्कमा ओर्लिएपछि सौचालय नहुँदा निक्कै पिडा भोग्नु परेको यात्रुहरु बताउछन् । बसपार्क क्षेत्रमा यात्रुहरुले सौचालय सोध्दा ‘नजवाफ’ बन्नु परेको बसपार्क काउण्टरका कर्मचारीहरु बताउछन् ।
जिल्लाको मुख्य बजार खाँदबारीमा कमसेकम दुई स्थानमा सौचालय निर्माण गरिए धेरैलाई राहत मिल्ने नागरिकहरुको भनाई छ । बसपार्क क्षेत्र र पोखरी बजार क्षेत्रमा मात्र भएपनि सार्वजनिक सौचालय सम्बन्धीत निकायले निर्माण गरे सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई सहज पर्ने भोजपुरबाट खाँदबारी बजार आउनुभएका लिलाराम राईको भनाई छ । लामो ईतिहास बोकेको खाँदबारी बजारमा अहिलेसम्म पनि कुनै सार्वजनिक सौचालय नहुनु लज्जाको विषय बनेको राईको ठहर छ ।
नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सौचालय र स्वाच्छ खानेपानीको ब्यवस्था गर्न नगरपालिकालाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको भएपनि अहिलेसम्मा ब्यावहारमा नदेखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बताउनुभयो । यस विषयमा नगरपालिकाका उपप्रमुख डेगेश्वरी श्रेष्ठसँग कुरा गर्दा सार्वजनिक सौचालय आफुहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । श्रोत जुटाएर नगरपालिका भित्र जमघट बढी हुने क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय निर्माण गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खाँदबारी नगरपालिकाको यस बर्षको कार्यक्रममा पनि सौचालय निर्माण सम्बन्धी बजेट छैन ।